01/02/12 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Google Earth Pro v6.0.2.2074 (2012)
Wednesday, February 29, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
Tuesday, February 28, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်3comments
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ Dictionary လေးပါ..။
နောက်ဆုံး Update Full Version ကိုမှ သုံးချင်တဲ့သူများ အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ် ...။ မြန်မာလိုပေါ်အောင်တော့ အသုံးပြုတတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်....လိုအပ်တာတွေအားလုံးလဲ ပါပြီးသားပါ...။
အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင် C-box , Facebook Wall ,Comment တနေရာရာကနေ ပြောသွားခဲ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
မြန်မာလို မြင်ရဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ များလာလို့ ဒီနေ့ (9March 2012 ) မှာ Install ပြုလုပ်ပုံလေးကို မသိသေးတဲ့ တခြားသူငယ်ချင်းများပါ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်ဖြည့်စွက် ရေးသားလိုက်ပါတယ်..။
ဒေါင်း လို့ရလာတဲ့ RAR ဖိုင် လေးကို ဖြည်လိုက်ပါ (Right Click >>Extract Here) ..။ ဖိုင် (၄) ခုထွက်လာမှာပါ..။
အဲ့ဒီ (၄) ခုထဲက Babylon9 Setup.exe ဖိုင်လေးကို Double Click နဲ့ RUN ပေးလိုက်ပါ.. Install ကို မနှိပ်ခင် မလိုချင်တဲ့ Toolbar တွေကို ရှေ့ကအမှန်ခြစ်လေးတွေ ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ....။ (အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်)
မြန်မာစာတွေ မြင်ရဖို့ကိုတော့ စောစောက ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင် (၄) ခု ထဲမှာ pandonma-english-myanmar.bgl ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို Double Click ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ...ပြီးရင် Babylon9က (+) လက္ခဏာ လေးကို နှိပ်ပြီး Language မှာ Other ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Babylon9မှာ သိချင်တဲ့ စာလုံးကို ရေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ ... ဒါလဲ မြန်မာစာတွေ မပေါ်သေးဘူးဆိုရင် (+) လေးရဲ့ ဘေးက ကမ္ဘာလုံးပုံလေးကို Click လိုက်ပါ.. ဒီလောက်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေလောက်ပါပြီ...:D
Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကိုတော့ Notepad ဖိုင်လေးထဲက User Name , Code License တွေကို Enter License မှာ တစ်လုံးချင်း ရေးထည့် ပေးရမှာပါ (Copy Paste လုပ်မရပါ) ဒီလိုင်စင် ကီး တွေနဲ့တင် အဆင်ပြေနေလို့ Patch ဖိုင်ကိုတောင် မသုံးလိုက်တော့ပါဘူး..။
window xp icon တွေအပြာရောင်ဖြစ်သွားရင်
Tuesday, February 28, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
C-box မှာ မေးသွားတာလေးပါ..။
(မိုးသူ: window xp icon တွေ ကအပြာရောင်ဖြစ်သွားလို့ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းရမလဲအကို)
ဒီပြဿနာလေးကိုတော့ ကျနော့်မှာ Window XP မသုံးတဲ့အတွက် စမ်းကြည့်မပေးလိုက်နိုင်ပါဘူး..ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာ ဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းလေးကိုတော့ အခြား ဆိုက်ဒ် တခုကနေ တွေ့လို့ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ နောက် ဒီလိုမျိုး ပြဿနာ ကြုံခဲ့ရင် ဖြေရှင်းလို့ရအောင်ပါ..။ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ရှင်းပြထားတာမို့ နားလည်ကြမှာပါ..။ မိုးသူ ရေ အဆင်ပြေပါစေဗျာ...:)
2.74MB သာရှိတဲ့ Window7ISO (19 August 2013 Update)
Tuesday, February 28, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 23 comments
မြန်မာပြည် ကသူငယ်ချင်းတွေ ကွန်နက်ရှင် အခတ်ခဲကြောင့် Window7ISO ကို လိုချင်ရက်နဲ့ ဖိုင်ဆိုက်ဒ် ကြီးနေလို့ လက်လျှော့ နေသူများအတွက်ပါ....။ ကျနော် စမ်းပြီးပါပြီ ဖိုင်ဆိုက်ဒ် ကတော့ 2.74MB ပဲ ရှိပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ 2.74MB ပဲရှိတဲ့ Window 7.rar ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ရင်တော့ 4.57GB ရှိတဲ့ Window7(အပြည့်အစုံ) ဖိုင်တွေ ရလာမှာပါ...။ရလာတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကို Select ပေးပြီး အခွေ Burn လိုက်ပါ .. ပြီးရင် အဲ့ဒီအခွေနဲ့ Window7တင်လို့ရပါပြီ...။
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် ရှိရုံနဲ့ အဝေး က ကွန်ပြူတာကို လိုသလို လှမ်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ ။
Team viewer လိုမျိုး အလုပ်သိပ်မရှုတ်စေပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးနဲ့ တခြားကွန်ပြူတာ ကို Control လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ...။ အသုံးပြုပုံကလဲ ရိုးရှင်း လွယ်ကူပါတယ်..။ Ammyy ဆော့ဝဲလ် လေးကို Run လိုက်ရင် ဘယ်ဘက်က အကွက်ထဲက Your ID (or) Your IP နံပါတ် တခုခုကို ကော်ပီ ကူးပြီး ကိုယ့်စက်ကို Control လုပ်ပေးမဲ့ လူဆီကို ပို့ပေးလိုက်ပါ ..။ တဖတ်လူက အဲ့ဒီ နံပါတ်တွေကို ညာဘက်က Clent ID/IP အကွက်လေးထဲမှာ ထည့်ပေးပြီး Connect ကိုနှိပ်ပေးရုံပါပဲ...။
Boost your Download speed with IDM optimizer (IDM ကို Download Speed မြှင့်ရအောင်)
Monday, February 27, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
1. ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ ။ Download IDM Optimizer
PC Tools Registry Mechanic 11.0.0.300 (Latest Version)
Monday, February 27, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
ဒီ PC Tools လေးကတော့ ကွန်ပြူတာရဲ့ registry ကို အကောင်းဆုံး ရှင်းလင်းပေးခြင်း ၊ Window ကို Speed တင်ပေးခြင်း နှင့် အခြား Feature များစွာပါဝင်ပါတယ် .. အသေးစိတ်ကို http://www.pctools.com မှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်...။
Sunday, February 26, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
Auslogics Task Manager Size : 2.4 Mb
Auslogics Task Manager ဆိုတာကတော့ လက်ရှိမိမိ ကွန်ပြူတာအတွင်းမှာ ဘယ် Program တွေ အလုပ်လုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ..။
Sunday, February 26, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
Uniblue Registry Booster 2012 |7Mb
C-box မှာ လာတောင်းသွားလို့ ရှာပေးလိုက်တာပါ...အရင်က Key တွေ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ပါတဲ့...။ ခုတင်ပေးလေိုက်တဲ့ Key တွေကို ကျနော် ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ ..။
မရှိသေးရင် အဲ့ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ပြီးရင် အောက်က ဖိုင်ထဲက Key တွေ ရေးထဲ့ပေးလိုက်ပါ..။
Window System ထဲမှာ .dll ဖိုင်တွေပျက်ဆီးသွားခဲ့ရင် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ ။
.dll missing ဖြစ်နေတဲ့ ဖိုင်တွေ ပြန်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်..။
Download DLL-file.com Fixer
Internet Download Manager (IDM) 6.09 Build3[Just Double Click] [23 Feb 2012]
Internet Download Manager (IDM) 6.09 Build3Final
ဒါလေးကတော့ ကျနော့ Blog လေးမှာ IDM အသစ်ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေကျ ဖြစ်တဲ့ Just Double Click လေးပါ..။ 23 Feb 2012 နေ့က ထွက်လာတဲ့ Update Version ပါ..။ Just Double Click ဆိုတဲ့ အတိုင်း ကလစ် နှစ်ချက်လေး နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Full Version လေးဖြစ်သွားမှာပါ...။
This product is licensed to ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာကိုယ့်နာမည်လေးနဲ့ ပေါ်စေချင်ရင်တော့ မနေ့ကတင်ထားတဲ့ IDM 6.09 Build3Full Patch လေးကို သုံးလိုက်ပါ...။ Install ပြုလုပ်ပုံ လေးတွေကို အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်..။
အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျားးးးး
Download IDM 6.09 Build3(Just Double Click)
Saturday, February 25, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
ysTweak Regclean Pro
C-Box မှာ .. ကွန်ပြူတာ အရမ်းလေးနေသလို ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ ...။ ကဲ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးသုံးပြီး ဖြေရှင်းပေးကြည့်လိုက်ပါ ဗျာ ..။ သူ့လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ..။
Download SysTweak Regclean Pro
internet download manager 6.09 build3final + full patch( 23 feb 2012 )
Friday, February 24, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
မနေ့က( 23 Feb 2012 ) ထွက်တဲ့ Update လေးပါ...။ Update ကိုမှ သုံးချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...။ Install မလုပ်တတ်သေးရင် Blog ရဲ့ အပေါ်ဆုံး Menu က internet download manager ဆိုတဲ့ tab မှာ နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ..။ အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျား....။
Download IDM 6.09 Build3FiNal
Full Version လေးဖြစ်အောင် Install လုပ်နည်းလေးပြောပြပါလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တောင်းဆို လာတာနဲ့ လုံးဝ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင် ဖြည့်စွက်ရေးသားလိုက်ပါတယ်..။
အရင်ဆုံး ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ .rar ဖိုင် ဖြည်လိုက်ပါ..။
idman609.exe လေးကို Double click နဲ့ Next Next အဆင့်ဆင့် သွားပြီး install လိုက်ပါ ...။
IDM ကို Register လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်...။ အားလုံးကို Cancel လုပ်ပါ..။ IDM ကို Exit ပေးပြီး ထွက်လိုက်ပါ ..။ အောက်နား ညာဘက်ထောင့်နားလေးက Tray Icon ထဲမှာ IDM logo လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Exit လုပ်ပေးလဲရပါတယ်...။
ဒီ Patch ဖိုင်လေး မ RUN ခင် Antivirus ကို ခဏပိတ်ပေးထားပါ...။
စောစောက ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲမှာ IDM.v6.xxx.release.3-Patch.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို Run လိုက်ပါ..။
Patch ကို Click ပါ..။
Enter FName မှာ ကြိုက်တဲ့ နာမည် တခုခု ရေးပါ ..။ ပြီးရင် OK နှိပ်ပါ..။ နောက်ထပ် Enter LName မှာလဲ ကြိုက်တဲ့ နာမည် တခုခု ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါ..ပြီးရင်ထပ်ပြီး OK လိုက်ပါ..။
ပြီးရင် Start ကနေ IDM လေးကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ .... ကိုယ်ရေးထားတဲ့ နာမည်လေးနဲ့အတူ Full Version လေးဖြစ်နေတာကို ဟိုးးး အပေါ်ဆုံးကပုံအတိုင်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ..။ (ခပ်တည်တည် နဲ့ IDM ကို 24 ဒေါ်လာ ပေးပြီး License Version အမှန်အကန် သုံးနေတယ်ပေါ့....ဟီးးးးးးးး) အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျားးးး။
Thursday, February 23, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
Scribd Site မှာတင်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်တွေကို ရိုးရိုးနဲ့ဒေါင်း လုဒ်လို့မရပါဘူး။ ဒေါင်းလိုက်ရင် Credit Card တွေတောင်းနေတယ်။ အဲဒါဆိုတော့ ကျနော်တို့လိုအပ်မည့် ဖိုင် တွေကို ဖရီးအနေနဲ့ဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲ။ ဒေါင်းနည်းတွေပေါ့ဗျာ။ သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့ ကျော်သွား ပေါ့ဗျာ။
၁။ ဒေါင်းချင်တဲ့ Scribd Site မှာရှိတဲ့ pdf ဖိုင်ရဲ့လင့်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ဥပမာ…အောက်မှာ မိမိဒေါင်းလုပ်မည့် pdf ရဲ့ URL လိပ်စာပေါ့နော်။ အဲဒီလိပ်စာမှာပါတဲ့ doc အစား mobile/documents နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ /Cre- ating a-Web-Page ဆိုတဲ့ Title ခေါင်းစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ပါ။ ထိုနောက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လင့်ကို Enter ခေါက်ပြီး ပြန်ဖွင့် လိုက်ပါ။
အပေါ်ကရေးထားတွေ သဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင် အောက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်ပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပြင်ပေးလိုက်ပါ..။
၂။ အထက်ပါလင့်ကို ပြန်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ အောက်ပါပုံအတိုင်းဒေါင်းလုဒ်ပေ့ဂ်ျပေါ်လာမယ်။ Download Now ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုဒ်ပြီးရင် ၎င်းရလာတဲ့ဖိုင်ကို ဖိုင်နာမည်.pdf လို့ Rename ပြန်ပေးလိုက်ရင်အားလုံးအိုကေပါပြီ။
32bit နှင့် 64bit operating system ဘယ်လိုကွာခြားလဲ
Thursday, February 23, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
32-bit နဲ့ 64-bit OS တွေရဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်သိသလောက် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.... 32-bit နဲ့ 64-bit တို့ရဲ့ ခြားနားချက်က ကွန်ပြူတာရဲ့ CPU (central processing unit) က သတင်းအချက်အလက် (information) တွေကို တွက်ချက်နိုင်တဲ့ပမာဏ (အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏ) ခြားနားချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.... 64-bit processor က တစ်ကြိမ် အလုပ်လုပ်ရင် 64 bit (2^64= 18,446,744,073,709,551,616) ပမာဏ data တွေကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ 32-bit processor ကတော့ 32 bit(2^32= 4,294,967,296 )ပမာဏ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် 64-bit စနစ်က လုပ်ငန်းတိုင်းကို 32-bit ထက် ပိုအလုပ်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါ... ကျန်တဲ့ computer တစ်ခုလုံးရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ speed တွေအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်.... (ဥပမာ CPU ရဲ့ speed ကဘယ်လောက်မြန်မြန် အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့)...နောက်ပြီးတော့ အသုံးပြုတဲ့ application တွေရဲ့ designed ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်... အသုံးပြုတဲ့ application က 32-bit အတွက်ပဲ designed လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် 64-bit မှာလည်း ပိုပြီး ထူးခြား မမြန်လာနိုင်ပါဘူး.... အခြေခံကျတဲ့ အချက်ကတော့ အချို့သော CPU ကို ခက်ခဲရှုပ်ထွေးစွာ အလုပ်လုပ်စေသော CAD(computer-aided design) ကဲ့သို့သော application တွေက 64-bit စနစ်အတွက် ပြုလုပ်ထားပြီး 32-bit ထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်...
Photo Editing & Saving Wizard Portable
Photo Editing & Saving Wizard Portable - 2MB
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ပြုပြင် တည်းဖြတ် ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ 2MB ပဲရှိပါတယ်..။
ကလိတာ ဝါသနာပါရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
Photo Editing &Saving Wizard is the perfect solution to perform base photo editing tasks, finish photo editing in Adobe Photoshop and create quality JPEG files. A lot of compression and resizing options let you save JPEG images with any size you need, providing the maximum quality possible.
Our advanced technology and JPEG encoding engine allow you to edit and save photos preserving their original picture quality. Using Photo Editing & Saving Wizard is the best way to get your pictures ready for printing, sharing or storing. You can easily do batch processing with multiple images. Also Photo Editing & Saving Wizard supports uploading and saving images to free and easy to use photo hosting and photo sharing services. Photo Editing & Saving Wizard works asastandalone application as well asaPhotoshop plug-in.
C-box မှာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောလာလို့ Install လုပ်ပုံလေး တင်ပြလိုက်ပါတယ်...။
Photo Wizard Portable.exe လေးကို Run လိုက်ပါ..။
ပုံထဲကလို ပေါ်လာရင် OK နှိပ်ပါ..။
ဒီနေရာမှာ Folder တခုခု ရွေးပေးလိုက်ပါ..။ ကျနော်ကတော့ Desktop ကိုပဲ Select ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ပြီးရင် အောက်ကပုံတွေအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားပါ...။
Hot MP3 Downloader 3.2.7.8
Wednesday, February 22, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
Hot MP3 Downloader 3.2.7.8 | 6.48 MB
အွန်လိုင်းမှာ ရှိတဲ့ MP3 တွေကို ရှာဖွေပြီး Download လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေးပါ အသုံးဝင်ပုံတွေကိုတော့ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ...။
Boost your Download speed with IDM optimizer (IDM ...
PC Tools Registry Mechanic 11.0.0.300 (Latest Vers...
Internet Download Manager (IDM) 6.09 Build3[Just...
internet download manager 6.09 build3final + ful...
Download photo slideshow software v2.75
Window7မှ ဝင်းဒိုးတွေ ထပ်နေတဲ့ ပြဿနာ ဘယ်လိုရှင်း...
Internet Download Manager 6.09 Build2( Just Dou...
iPhone iOS5အတွက် ဇော်ဂျီ Keyboard ထွက်ပြီ
AutoCAD 2010 မြန်မာလို စာအုပ်
Virus Remover: Geekz Virus Remover v4.2
SwishMax Full Software နှင့် Flash Song လုပ်နည်း...
MICROSOFT BLUE EDITION 2010
USB Write Protect 2.0 (Write Protect Error အတွက်)
ဆော့ဝဲလ် ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ All in one Hiren's...
isobuster 2.8.5 final - full (CD/DVD ခွေပျက်တွေထဲက...
ဘာ Key မှ ထည့်ပေးစရာ မလိုတော့တဲ့ internet downloa...
Revo Uninstaller Pro 2.5.7 (Latest)
အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အပေါ် မှာ အခြေခံပြီ...
nternet Download Manager (IDM) 6.09 Beta- 100% ( ...
Winrar NEw 2012 Full Version 1000000%
USB Disk Security 6.1.0.432 Full Version+Crack 100...
Your Uninstaller Pro v7.4.2012.01 Full + Serial a...
SmadAV 2012 9.1.1 PRO Full + Serial
SuperCopier 2.2 Beta ( မြန်မြန် ဆန်ဆန် Copy (or) M...
RegDoctor 2.29 full + Keygen
SpeedyPC Pro 3.0.0 Full + Patch
iPhone, iPod, iPad များအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ...
Samsung galaxy ဖုန်းတွေမှာ Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန...
Mac ကွန်ပြူတာမှာ Zawgyi font အသုံးပြုနည်း